Rindrambaiko fitantanana Proposal dia mampiroborobo ny orinasa
Nandritra izay roa taona lasa izay dia niova tanteraka ny varotra tamin'ny fahatongavan'ny vanim-potoana niomerika. Manokana, ny fomba fandefasan'ny olona sy ny fahazoana tolo-kevitra momba ny varotra dia nohatsaraina tamin'ny fivoaran'ny rafitra fitantanana tolo-kevitra momba ny varotra an-tserasera, toa ny mpanjifa TinderBox. Fa maninona ireo vahaolana ireo no tsara kokoa noho ny fanoratana tolo-kevitra momba ny varotra ao amin'ny Microsoft Word fotsiny? Eny, nanao infographic iray manontolo momba an'io izahay.
Ny vokatra dia mitombo be amin'ny fampiasana ny iray amin'ireto vahaolana ireto, ary koa ny vola miditra. Ny rindrambaiko miorina amin'ny rahona dia nanatsara ny fizotry ny fizotry ny varotra, ary raha ny tena izy dia mihatsara koa ny tsingerin'ny varotra. Na orinasa kely ianao, tompona tokana, na orinasa orinasa lehibe, ireo fitaovana ireo dia hamonjy fotoana sy vola. Fa miankina amin'ny fomba fampiasanao azy ireo koa izany.
Ny fangatahana fahatsapana maro dia fomba tsara iray hampiasana fanantenana. Ao amin'ny tolo-kevitro dia tokony hampiasa horonan-tsary, feo (raha azo ampiharina), ary sary ianao hisarihana ny sain'ny prospect. Tetikasa tsara ihany koa ny tolo-kevitra marika, fa alao antoka fa tsy dia mavesatra loatra izany. Ny tolo-kevitra dia tokony momba ny fahitan'ny prospecta ny filan'izy ireo amin'ny ankapobeny.
Liana te hahafantatra aho - ahoana no fomba andefasanao sy amoronanao ny tolo-kevitrao? Email? Antontan-taratasy? Inona ny fanambinao lehibe indrindra amin'ny tolo-kevitry ny varotra?
Tags: gettinderboxSary torohaytolo-kevitrafitantanana tolo-kevitrarindrambaiko fitantanana tolo-kevitratinderbox